I-Line Messenger Spy App - Ukuqapha I-Chat Line Messenger Ingxoxo nokuxoxa
I-Line Spy App - Gxila izingxoxo ze-Messenger Chat Chats
Ukuhlola isigijimi somugqa kungasindisa izingane zakho ukuvimbela ukuhlukunyezwa kwe-cyber kanye nezidalwa ezidliwayo ezixhunyiwe ku-inthanethi nomqashi angenza isheke kwimisebenzi yabasebenzi.
I-Tracking Line Messenger
Kungase kubonakale kunzima kakhulu, kepha i-TheOneSpy Inhloli ye-line ye-Android kukunika amandla okugcina imisebenzi yezingane zakho ikakhulukazi asetshenziselwa ukwenza izingcingo, ukwabelana ngamavidiyo nokuthumela imiyalezo. Abaqashi bangakwazi ukukhulisa umkhiqizo wabasebenzi bawo abavame ukuchitha isikhathi sabo kwizinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo njenge-Line.
TheOneSpy Line Spy App Ungayenza
Buka zonke izingxoxo & izingxoxo zamaqembu
Bona Isikhathi sesikhathi esiqondile yezingxoxo
Buka igama kanye nolwazi lwephrofayela ngubani oxhunywe nesithunywa.
Bheka i izitika kanye nemizwelo okuyinto ephathekayo ngenkathi ingxoxo
Bheka ukwabelana kweMediya ezifana nezithombe, amavidiyo, namavidyo omsindo.
Buka futhi gcina izingxoxo zezingxoxo
Landelela uhlelo lokusebenza lwe-Line Line Instant Messaging kunoma iyiphi i-Android Phones
Amakholi Ezingcingo Zomugqa
Ukungena ngemvume kwe-TOS
Okokuqala, udinga nje ukuya kuwebhu ngu ukuvula isiphequluli sedivayisi yakho ye-smartphone. Khona-ke kufanele uthayiphe cp.theonespy.com. Sebenzisa ubuqiniso bokungena ngemvume kokunikezwa ukuze ungene ngemvume. Emva kwalokho, uzoya "izinsizakalo zami"Ikhasi. Thepha kumasevisi bese ungena kudeshibhodi.
Manje hamba ku-IM's izingodo bese uchofoza kuso. Manje udinga ukukhetha amalogi we-Line bese uyilungisa kwimenyu yehla. Manje ungabona izingxoxo, izingxoxo, ingxoxo yeqembu kanye nezinto zokwabelana ngezindaba.
Uma usufinyelele ukufinyelela emigqeni yomugqa, uzobona amathebhu amabili. Enye imayelana nezingxoxo zengxoxo yombhalo futhi owesibili kungaba yizigibe zezwi. Manje chofoza kuma-Voice logs futhi uzokwazi ukubona uhlu lwazo zonke izingcingo ezenzeka kwi-Line messenger.
Yiziphi izici esinikeza nge-Line Messenger Spy Software?
Kungani uhlola i-Line Line Messaging App?
Ngokwezibalo, isithunywa sezintambo sithandwa phakathi 600 abayizigidi ezingu abasebenzisi emhlabeni jikelele. Ibuye ingena ngokungazelelwe emahhovisi kanye nasesizukulwaneni esincane akukho isikhathi esingaphambilini.
Abasebenzi abanezinsiza zabo ze-smartphone futhi bachitha isikhathi sabo kuwo ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza lomyalezo osheshayo ngesikhathi sokusebenza kwehora, njengokuthi ukuthumela imiyalezo, izingcingo, izingxoxo, nezingxoxo zeqembu nabangane nozakwabo.
Izingane ezincane kanye nentsha ayinaso umqondo wokuthi lezi Izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo esheshayo ziqukethe ama-cyber bullies, abadli be-intanethi, nabakwa-stalkers. Bona bangase bahlangane nabo nganoma yisiphi isikhathi.
Uhlelo lokusebenza lwe-TheOneSpy line-spy kungaba ukukhetha okuhle kakhulu futhi okuphumelelayo kwabazali nabasebenzi. Ngakho, uthola isofthiwe yokuqapha umugqa ngokushesha ngangokunokwenzeka.
2.5 ngokusekelwe ku 3 amavoti
I-Line Spy App